साइकलमा श्रीमतीको शव बोकेको भाइरल तस्वीर र वास्तविकता! - Mahendranagar Post
Home देश साइकलमा श्रीमतीको शव बोकेको भाइरल तस्वीर र वास्तविकता!
साइकलमा श्रीमतीको शव बोकेको भाइरल तस्वीर र वास्तविकता!
काठमाडौं– उत्तर प्रदेशको जौनपुर जिल्लाको मडियाहूं थाना क्षेत्रको अम्बरपुर गाउँको एक तस्वीर इन्टरनेटमा दुःखद् कमेन्टसहित भाइरल भयो ।
यस तस्वीरमा एक व्यक्तिले आफ्नी पन्तीको शवलाई साइकलमा राखेर उभिएको दुःखद् तस्वीर देखाइएको छ । केही तस्वीरमा उनले आफ्नी मृत श्रीमतीको शवलाई समाएर बसेको तस्वीर भाइरल भएको हो ।
उनी ५५ वर्षीय तिलकधारी सिंह हुन् । उनकी पत्नी राजकुमारी देवीको मंगलबार जैनपुरको सदर अस्पताल बाहिर कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको थियो । सरकारी एम्बुलेन्सले राजकुमारीको शवलाई गाउँसम्म त पुर्‍याइदियो ।
तर कोरोनाको डरका कारण उनकी श्रीमतीको अन्तिम संस्कारको लागि गाउँका कोही पनि आउन मानेनन् । त्यसपछि उक्त महिलाको जौनपुर प्रहरीले नै अन्तिम संस्कार गराएको थियो ।
जौनपुरका अतिरिक्त प्रहरी अधीरक्षक ९ग्रामीण० त्रिभुवन सिंहका अनुसार तस्वीर प्रहरीसम्म पुगेपछि मडियाहू थानाका प्रहरी गाउँ पुगे र अन्तिम संस्कार गराए । तर त्यतिबेला पनि गाउँका कोही पनि अन्तिम संस्कार गराउन आएनन् ।
सिंह भन्छन् ‘जब प्रहरी गाउँमा पुगेको थियो तब तिलकधारी सिंह लासको नजिकै बसिरहेका थिए । गाउँका केही व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित पनि भएका थिए । सोही गाउँका एक युवक चन्दन सिंहले तिलकधारी सिंहको घर गाउँबाट छुट्टै रहेको र आफ्नी श्रीमतीको मृत्युको बारेमा उनले कसैलाई पनि खबर नगरेको दाबी गर्छन् ।
चन्दन भन्छन् ‘घर ल्याएर उनले कसैलाई पनि नभनी शवलाई साइकलमा राखिरहेका थिए । त्यतिबेला दिउँसोको साढे २ जति बजेको थियो होला । उनको साइबलबाट बीचैमा शव झर्‍यो । नजिकैको नदी किनारामा अन्तिम संस्कार गर्न खोज्दा गाउँलेले विरोध गरे ।’
चन्दन स्वयंले उनकी पत्नीको अन्तिम संस्कारमा दाउरा खोज्न सहयोग गरेको बताए । चन्दन भन्छन् ‘गाउँका २०–२२ जना आएका थिए । उनीहरुले महिलाको शवलाई काँध थापेका थिए । सबै मिलेर शवलाई नदी किनारसम्म ल्याइयो । तर अर्को गाउँका मान्छेले विरोध गरेर त्यहाँ जलाउन सकिएन ।
यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय पत्रकार र प्रंहरी अधिकारीले भने राजकुमारीको अन्तिम संस्कारको लागि प्रहरी पुग्नुपूर्व कोही पनि गाउँले त्यहाँ पुगेका थिएनन् । जब प्रहरी मृतकको घरमा पुग्यो र नदीको किनारामा पुर्‍याएर अन्तिम संस्कारको तयारी गर्‍यो ।
तब स्थानीयले कोरोना महामारीको हवाला दिँदै विरोध गरे । अतिरिक्त पुलिस अधीरक्षक त्रिभुवन सिंह भन्छन् ‘जब प्रहरी टीम गाउँ पुग्यो, त्यतिबेलासम्म अन्तिम संस्कार गराउनको लागि कोही आएनन् । प्रहरी टीमले पूरै विधिविधान पूरा गरेर अन्तिम संस्कार गराए ।
चन्दन सिंहका अनुसार अम्बरपुरको उक्त सानो गाउँमा ४५० जना जतिको बसोबास रहेको छ । अहिलेसम्म उक्त गाउँमा ५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । चन्दन भन्छन् ‘यदि गाउँमा टेस्ट गराउने हो भने यो संख्या अझै धेरै हुने गर्छ । यहाँका मान्छेमा कोरोनाको महामारीको ठूलो भय छ ।
धेरै गाउँलेहरु या त खेती गर्न बारीमा जान्छन्, फर्किएपछि घरमा नै बस्ने गर्छन् ।’ तिलकधारी सिंह गाउँमा आफ्नी पत्नीका साथ एक्लै बस्ने गर्थे । उनकी छोरी छिन् तर उनको विवाह भइसकेको छ । उनको एक छोरा पनि छन् । तर उनी अहिले दिदीको घरमा नै बस्ने गर्छन् । तिलकधारीको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन। बीबीसी हिन्दी
Previous articleकर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा
Next articleमाओवादी केन्द्रनिकट गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस